သံသရာဆိုတာကို ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » သံသရာဆိုတာကို ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ…
ကနေ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ လောကကမာ(world) ကြီးမှာ…သက်ရှိသက်မဲ့တွေ
အားလုံး မွေး၊အို၊သေ ဖြစ်ပြီးလျှင်ပျက်….
ဆိုတာတွေဟာ …သဘာဝဖြစ်စဉ်ပါ…ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ဘယ်တော့ရပ်မလည်း ဒီလို လည်ပတ်နေတာ မပြီးဆုံးနိုင်ပါလားဆိုပြီးတွေးနေမယ်ဆိုရင်… ဒီသံသရာစက်ဝန်းက လွတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး…
တလှံမျှသော ခနာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက စက်ဝန်းလှည်ပတ်နေတာကိုတွေ့ အောင်ရှာနိုင်မှ ဒုကဆင်းရဲတွင်းကနေလွတ်မှာ….
Buddha ပြောတဲ့ သံသရာက… ဒီလောက သံသရာထဲ လူလည်ပတ်နေတာ မဟုတ်..
သံသရာဆိုတာ လူတွေထဲမှာ ဒုကဆင်းရဲ လည်ပတ်နေတာကိုပြောတာ…
တနည်းအားဖြင့် …ပုဂလိဂက ဋ္ဌာနဖြစ်ပြီး…သံသရာက ဋ္ဌာနီပေါ့….
ဒို့ဟာ သံသရာ စက်ဝန်းထဲမှာ… လည်ပတ်နေတာမဟုတ်ဘဲ..ဒို့ရဲ့ တလှံမျှလောက်သော လူမှာသံသရာ
Buddha ဟောတဲ့ သံသရာက လူ့သံသရာ မဟုတ်ဘူး… ဆင်းရဲဒုကရဲ့ သံသရာဖြစ်တယ်…
လူလည်ပတ်ပုံ မဟုတ်ဘူး…လူကိုယ်ပေါ်မှာ ဒုကဆင်းရဲ လည်ပတ်ပုံ ကိုဘုရားဟောတာ ဖြစ်တယ်…
ဒါကို ပြောနိုင်ရလောက်အောင် ဘယ်စကား ကသက်သေခံနေလည်းဆိုရင်….
– တလှံမျှလောက်သော မိမိခနာမှာ…တရားရှိတယ်ဆိုတာ ဘုရားဟောထားပါတယ်…
– နောက်တခုဘာနဲ့ပြောလို့ရလည်းဆိုတော့ ..ဈာန်အဘိဉာဏ်ရ ရသေ့တပါးဟာ တန်းခိုးနဲ့ (၃၁) ဘုံလောက အဆုံးကိုသူရှာတာ လောကအဆုံးကိုသူ မတွေ့ဘူးဆိုပြီး..ဘုရားကို ပြန်လျှောက်တော့ …ဘုရားက တလှံမျှသောမိမိ ကိုယ်ပေါ်မှာ သံသရာအဆုံးရှိတယ် လို့ဘုရားဟော ကိုလည်း ဇာတကမှာ…ဖတ်ရဖူးတယ်…..
ဒါကြောင့် သံသရာအဆုံး၊(၃၁) ဘုံဆိုတာလည်းအဝေးကြီး မဟုတ်ပါဘူး…
တလှံမျှသော မိမိခနာမှာသာလျှင် (၃၁) ဘုံရှိပါတယ်….
– Buddha မဟောဘဲ Buddha ရဲ့စာပေထဲမှာ ရောက်နေသော.. ယခုမြင်တွေ့နေရသော နေ၊လ၊ နကတ်(နက်ခတ်)တို့သည်..
ထိုစတုမဟာရာဇ် နတ်ပြည်တွင်ပါ ဝင်သော ဘုံဗိမာန်များဟု ဗုဒဘာသာကျမ်းစာ မှာဆို၏…
– ကနေ့ လောကဓါတ်သိပံ ပညာထွန်းကားတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ… လူတွေလပေါ်ရောက်နေပါပြီ.. သူတို့ နတ်ကို မတွေ့ပါဘူး…. စဉ်းစားလို့ ရအောင်.. ရိုးရာ အစဉ်အလာက ဖေါက်ထွက်ချင်တဲ့ အနာဂါတ်လူငယ်
အမလေးဗျာ ဆရာသမားရယ် ကျနော်တို ့လဲမသိပါဘူးဗျာ။
နို ့ပေမယ့် အကြံပြုပါရစေ။
-ဝေငှက ဝေဌ ဖြစ်နေ
-ဒုက္ခက ဒုက ဖြစ်နေ
-ပုဂ္ဂလိက ပုဂလိဂက ဖြစ်နေ
ထောက်ပြပေးတာပါနော်။ပို ့စ်လေးက မိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဟုတ်တယ် ..ကျွန်တော် စာလုံးထပ်ရေးတာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်…ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ကမ်ဘာကို အင်္ဂလိပ်လို world လို့ရေးလိုက်ရတာပါ.. ကျွန်တော့်ကို ပြောပြပေးပါဦး..
ကျေးဇူးပါဘဲနော်… အမှားနည်းအောင် ဆက်လက်ကြိုးစားပါမည်….
ထေရဝါဒ၊ မဟာယန၊ ဝဇီရာယန ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံး
-ဘုရားအလောင်းအဖြစ် ဘဝပေါင်းများစွာ ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရသောအယူ၊
-လူ့ဘဝ အပြင် ပရလောက (အပါယ်လေးပါး) ရှိသေးသည်ဟူသောအယူ၊
-ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၊ ဓမ္မစကြာ၊ သစ္စာလေးပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးအယူ ၊
-ကံကံ၏အကျိုး (အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပါန်၊ အနာဂတ်အယူ)၊
-ပါဏာတိပါတကံ အယူ(တိရစ္ဆာန်များပါပါဝင်သည်) အားလုံး အတူတူပင်ဖြစ်လေသည်။
ထိုသဘောထား အခြေခံမျှ မတူညီနိုင်ပဲ ဗုဒ္ဓစာပေများကို အကိုးအကားပြုကာ
မိမိတို့ဝါဒကို အများလက်ခံအောင် ဗုဒ္ဓစာပေများကို ထုတ်ယူကိုးကားလျှက် မိမိလိုသလို ဘာသာပြန်ပြီး
ဗုဒ္ဓသာသာအမည်ဖြင့် သပ်လျှို လိမ်လည် လှည့်ဖြားခြင်းကို ရပ်တန့်သင့်ပေပြီ။
မိုးပြာတို့ အကြံဉာဏ်ကို ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန်
အလွန်ကြီး အနုစိတ်မတွေးတောသေးဘို့ မိတ်ဆွေကို ရိုးစားစွာ အကြံပေးပါတယ်
ရံခါ လူသတ္တဝါမှာ သင်္ခ ါရလို့ခေါ်မလား အနိစ္စလို့ခေါ်မလား
ဒီလို မျိုးသတိစိတ်လေး ဝင်လာတတ်ပါတယ်
ဥပမာ လူ့ဘဝဟာ လောကီဥစ္စာ လိုခြင်မှု့တွေတွက် ကျိုးစားအားထုတ်ရုန်းကန်နေကြတာပါဘဲ
အဲ့သည်ဘာမှ မဟုတ်တာကိုဘဲ ဘာအတွက်မှန်းမသိ ဘာဘဲလုပ်ရလုပ်ရ လုပ်နေကြတာဘာဘဲ
ပြဿနာက ကိုယ့်ကိုယ်လည်း ဘာမှန်းမသိသေးလို့ပါ
ဘုရားတရားဟာ … မိမိသာလျှင် ကိုးကွယ်ရာ၊ မှီခိုရာ၊ လှဲလှောင်းရာ..မိမိသာလျှင် အရှင်သခင်..စသည် ဘုရားဟောကြားထားတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားက ကျွန်တော်တို့ကို လူ့ အဖြစ်ပြန်ရရှိအောင် မွေးဖွါးပေးတာလို့ သဘောပေါက်မိပါတယ်…
ဘာမှမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သုညဖြစ်နေလို့ အဲဒီအတွေးတွေဝင်သွားရင် လူတွေဟာ ဘာမှ မလုပ်ချင်မကိုင်ချင် ဖြစ်ပြီး လောကမှာ နေရတာ မပျော်ဘူး ဖြစ်သွားမယ်.. လူအဖြစ်ရခဲတယ်ဆို ပြီး လူဖြစ်နေပါလျှက်… ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာမှန်းမသိသေးတာ ဆိုရင်… သိအောင်လေ့လာရပါမယ် လို့ထင်မိပါတယ်….
ဗုဒ္ဓဟောထား တာရှင်းရှင်း လေ။ငါတို့လို ငထူ ငအတွေတောင် နားလည်အောင် ဟောနိုင်ခဲ့တဲ့ တာ။ လူ လူဖြစ်နေသ၍ ဒုက္ခ ဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ သံတရာ က ဘယ်တော့မှ မလွတ်ဘူး။
ကျနော် နားလည်တာတော့ သံသရာ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက လည်ပတ်ခြင်းလို့နားလည်ပါတယ်။ circle ပေါ့ဗျာ။ စမှတ်နဲ့ ဆုံးမှတ်ပြန်ဆက်ပြီး တရစပ်ဖြစ်နေသော အဖြစ်မျိုးကို သံသရာလို့ပြောရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ သံသရာ လို့တင်ပြောရင် မပြည့်စုံပါဘူး။ ဘာသံသရာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာ တော်မှာ ရှင်းပါတယ်။ ဒုက္ခသံသရာကို အစ အဝိဇ္ဖာမှ စပြီး ဇာတိ၊ ဇရာမရဏတိုင်အောင် ဒုက္ခသံသရာ တရစပ်လည်ခြင်းကို နှစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ဟောကြားထားတာပါ။ လူမှာ ဒုက္ခသံသရာ စက်ဝိုင်း ဒီလိုဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ ပေါ်လွင်လှပါတယ်။ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုလည်း ဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းသလဲဆိုတာကိုလည်း အဝိဇ္ဖာ နိရောဓဖြစ်မှသာ သင်္ခါရနိရောဓေါ အစချီပြီး ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓက လူသားလောကကို ဒုက္ခသံသရာ ဘယ်လိုလည်တယ်၊ ဒုက္ခသံသရာက ဘယ်လိုလွတ်မြောက်မှု ဖြစ်စေတယ် ဆိုတာကို ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာတော်မှာ မြင်သာထင်သာအောင် ဟောကြားထားပါတယ်။ ဒီနေ့သံဃာတော်၊ ဆရာတော်တို့ ဗုဒ္ဓဘိသေက အနေကဇာတင်ရင် ရွတ်ဆိုကြပါတယ်။
ဘာလို့ တစ်ခါလာမိုးပြာ၊ မိုးပြာနဲ့၊ ဒီမိုးပြာအကြောင်းတွေကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေတာလဲ။ k-red ပြောတာကို မှားနေရင်ထောက်ပြပြောဆို၊ မှန်လျှင်ထောက်ခံ၊ မိမိအသိအတိုင်း တင်ပြဆွေးနွေးစေလိုပါတယ်။ မေတ္တာထား တောင်းဆိုတာပါ။ ကျနော်တို့ MG ထဲကို ဝင်ရောက်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က တစ်ခုထဲပါ။ အခြားသူတွေ ဝေမျှတဲ့ အသုံးချမယ့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာဆည်းပူးချင်တာပါ။
ကျနော်သည်လည်း ဝါဒစွဲမရှိသော သာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါသည်။
“ဗုဒ္ဓဟောထား တာရှင်းရှင်း လေ။ငါတို့လို ငထူ ငအတွေတောင် နားလည်အောင် ဟောနိုင်ခဲ့တဲ့ တာ။ လူ လူဖြစ်နေသ၍ ဒုက္ခ ဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ သံတရာ က ဘယ်တော့မှ မလွတ်ဘူး။”လို့ pyaponthu က ဆိုထားတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓ သစ္စာလေးပါးတရားရရှိပြီး ဥဒါန်းကျူးတာကို ကြားဘူးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တဏှာယောက်ျား အမောင်လက်သမား သင်ဆောက်သော ခန္ဓာအိမ်၏ အချင်၊ ရနှယ်အားလုံးကို ချိုးဖျက်ခံရပြီ။ နောက်ထပ် ဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုတော့ဟု ကြုံးဝါးပြီးဥဒါန်းကျူးရင့်ခဲ့ပါတယ်။ လူ၏နေသ၍ ဒုက္ခမကင်းလို့တော့ မလုပ်လိုက်ပါနဲ့မောင်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ မလွန်ခင် ၃၅မှ၈ဝအတွင်း ဒုက္ခမကင်းသူအဖြစ် မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့။
ဒီနေရာမှာ ဒုက္ခကို နှစ်မျိုးကွဲအောင်သိဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သဘာဝဒုက္ခ(သို့)ခံစားချက်ဒုက္ခ နှင့် ဘဝဒုက္ခ(သို့)အဖြစ်ဒုက္ခ ကိုတော့ ကွဲသိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဘဝဒုက္ခဆိုတာကတော့ သမုဒယသစ္စာကို အကြောင်းခံပြီး ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါ။ ဘဝဒုက္ခမှသာ လွတ်အောင် မြတ်ဗုဒ္ဓညွှန်ကြားဆုံးမတာပါ။ သဘာဝဒုက္ခကတော့ ဒုက္ခမဟုတ်တာကို ဒုက္ခလုပ်နေလို့သာ ဒုက္ခလို့ ပြောရတာပါ။ တကယ်တော့ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။
ဘုရားဟာ … ငါကတော့ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ က လွတ်မြောက်ပြီ…တဏှာယောင်္ကျားလက်သမားဆောက်တဲ့ ခနာအိမ်ကို ငါတွေ့ပြီလို့ပြောပြီး.. ဘာဖြစ်လို့ ခနာ(၅)ပါးကျန်နေသေးလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ဘုရားဟာ.. (၃၂) ကောဋ္ဌာသ ဖြစ်ပျက် ကျန်နေသေးလဲ.. တကယ်လို့ (၃၂) ကောဋ္ဌာသ ဖြစ်ပျက် ကုန်မှ ဆင်းရဲ့ ကလွတ်မယ်ဆိုရင်..ဘုရားလည်း ဒုကဆင်းရဲ ကမလွတ် သလိုမျိုးများ ဖြစ်နေမလား လို့ စဉ်းစားကြည့်တာပါ….
ဘုရားပြောတဲ့ ခနာ(ခန်ဒါ)ဆိုတာ အစွဲခနာပါ.. သဘာဝခနာ မဟုတ်ဘူး…
ဘုရားပြောတဲ့ ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ သဘာဝ ဖြစ်ပျက်မဟုတ်ဘူး.. အစွဲ ခနာရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပုံ (အနီစ= ပျက်စီးပုံ၊ ဒုက= ဆိုးဝါးပုံ၊ အနန= အသုံးမကျပုံ၊ အသုဘ= မလှမပ ပုံကိုမြင်ပြီး…ဒီ(၃၁) ဘုံ အကောင်ပလောင် ရဲ့ (ပျက်စီး၊ဆိုးဝါး၊အသုံးမကျ၊ မလှမပ ) တဲ့ အဖြစ် ကနေလွတ်တာကို ပြောတာ…